Sidee loo nadiifiyaa Apps 'Data ka iPhone ah f
Maxaad ugu baahan tahay in Clear App Data
Ka dib markii aad soo bixi oo loo isticmaalo app ah oo ku saabsan iPhone, waxaa laga yaabaa in aad dareento in baahida loo qabo soo reynaya sidii xogta app ka telefoonka. Waxaa lagu A sababo badan loo yaqaano yar in ay sidaa sameeyaan hoos ku qoran:
Hoos u dhac Performance App - Haddii aad isku aragto in aad app lagu fulinayo gaabis ah ama dhaqmayaan obnoxiously, waxa laga yaabaa inay tahay waqtigii ugu haboonaa in ay nadiifiso ay khasnado ka iPhone.
Hoos u dhac Performance Phone - Haddii aad app waa culus yahay oo door weyn ka qabadka guud ee telefoonka, aad rabto in aad kala cadeeyo Xogta app ee ka iPhone in ka saaraysaa files junk app ee si si ay u kordhiso waxqabadka iyo u soo celiyo caadi ah.
Dib u celi App in ay la bixin kari Factory - ayaa sidoo kale laga yaabaa inaad doonayso in ay nadiifiso xogta app ee ka iPhone marka aad rabto in aad dib app in ay la bixin kari warshad ay. Waxaad doorbidi lahaa sameeyo si haddii aad waayey ilaa gaadmada ah app oo dhan oo aadan aqoon sida loo caadi ah dib u hesho.
La baneeyo xogta app ee tirtiro ay u qaabeynta caado iyo dhammaan faylasha junk in lagu abuuray ee telefoonka tan iyo app ee lagu rakibay ah. Tan oo dhan files dheeraad ah oo aan loo baahnayn oo laga saaray inta lagu guda jiro geeddi-socodka xogta banaanka, telefoonka iyo app bilaabi si caadi ah u fulineynin.
Sidee loo nadiifiyaa Data App ee ka iPhone
Inkastoo ay jiraan barnaamijyo kale oo kaa caawinaya inaad u qabtaan hawsha iyo xitaa aad nadiifin kartaa xogta barnaamijyadooda 'ka gudahood ah iPhone ee interface laftiisa, habka ugu fiican ee aad u samayseen waa la isticmaalayo Wondershare SafeEraser . Wondershare SafeEraser waa qalab wax ku ool ah kaas oo loo habeeyey oo loogu talagalay ujeeddo.
Ma aha oo kaliya taasi, Wondershare SafeEraser kale oo uu leeyahay qalab kale oo badan oo fiican oo iPhone iyo iPad in la kordhiyo iDevices aad 'waxqabadka, sidaas idin siinayo oo ah waayo aragnimo dhamaadka user kama dambaysta ah iyo oggolaadaan in aad ka faa'ideysan qalab aad ee ay ka buuxaan.
Ka dib markii ay soo degsado version ku haboon ee Wondershare SafeEraser, waxaad isticmaali kartaa habka caadiga ah si loo soo dajiyo barnaamijka aad kombuutarka. Ka dib markii ay ku rakibidda, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoos ku siiyo si ay u isticmaalaan SafeEraser Wondershare si aad u nadiifiso xogta app ah ee ka iPhone:
Burcad SafeEraser Wondershare aad kombuutarka by double-gujinaya ay toobiye icon.
Connect aad iPhone in computer isticmaalaya cable xogta oo u yimid ay la socdaan waxaa la.
U ogolow SafeEraser Wondershare soo bixi wadayaasha ah looga baahan yahay qalab ku xiran. (Aad bixiso ogolaashahaaga si ay u oggolaadaan SafeEraser in la sii wado meel kasta oo looga baahan yahay.)
Haddii aad PC ma laha Lugood, aad bixiso ogolaashahaaga si ay u oggolaadaan Wondershare SafeEraser si loo soo dajiyo Lugood iyo sidoo marka ay keentay in.
Ka dib markii la rakibey dhameystiray, ka interface ugu horeysay, riix Nadiifinta 1-Click icon (icon la calaamad Gaetano ah).
On interface soo socda, sug ilaa iyo inta baaritaano SafeEraser Wondershare ee Chine ku rakiban iyo xogta ay la rabin in la nadiifin karo.
Marka iskaanka la soo gabagabeeyo, jeeg ama uncheck checkboxes matalaya Chine, kuwaas oo xogta aad rabto in aad ka saarto ama aad u kala horreeyaan.
Ugu dambeyntii riix nadiifinta button ka hooseysa.
Sug ilaa SafeEraser ka saaraysaa xogta barnaamijyadooda la rabin 'ka iPhone.
Marka sameeyo, ku dhow Wondershare SafeEraser ama haddii loo baahdo, waxaad sidoo kale riixi kartaa Rescan button ka hooseysa in ay sameeyaan rescan ah hawlaha nadiifinta dheeraad ah.
Sida kor looga hadlay, marka laga reebo nadiifinta xogta barnaamijyadooda 'ka iPhone, Wondershare SafeEraser ayaa sidoo kale awood ugu leeyihiin qabashada hawlaha kale ayna iDevice kala duwan. Yar oo ka mid ah hawlaha sida ku qoran yihiin hoos:
Masixi All Data - Doorashadan waxa kaa caawinaysaa in aad ka saarto dhammaan xogta in telefoonkaagu uu leeyahay. Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho ikhtiyaar marka aad qorshaynayso in ay iibiso iDevice off in qof aan la aqoon, oo aadan rabin in macluumaadkaaga shakhsiyeed la kulmin qof dibada ah.
Masixi tirtiray Files - Waxaa laga yaabaa inaad rabto in aad isticmaasho Doorashadan marka aad rabto in aad hore u files tirtiray wax alla wixii irrecoverable. Tani waxa ay noqotay arin muhiim ah marka aad rabto in aad u Wakiil aad telefoon iska laakiin aad ogtahay in uu ka kooban yahay macluumaad xasaasi ah in aanad awoodi karin inuu la kulmo qof kasta oo aan la ogalayn.
Masixi Data Private - masixi Private Data tirtiro oo dhan files shakhsi ee laga aad telefoon oo iyaga ka dhigaa inay xataa la aadka u hufan qalab kabashada xogta irrecoverable.
Space Saver - waa in aad iDevice ayaa sawiro HQ / HD badbaadiyey ee ay xasuusta, Space Saver kaa caawinaysaa in aad cadaadin images kuwa si ​​ay u isticmaalaan meel ku saabsan telefoonka fiican loogama.
Ahaanshaha milkiilaha kibirsan aaladaha Apple, Wondershare SafeEraser in qalab qasban tahay inay leedahay si ay u gutaan aad u baahantahay oo dhan. Iyadoo SafeEraser waxaad yaqiinsanaysaa in macluumaadkaaga shakhsiyeed la ilaaliyo dhaxyada, aad iPhone ama iPad siinaysaa qaab mug leh, iyo marka ay waajib tahay, xogta aad xasaasi joogto ah iyo irrecoverably waa laga saaray qalab aad ka hor inta qalab la wareejiyay qof dibada ah muddo dheer waqti.
Nadiifi App Xogta iPhone Video Tutorial
> Resource > masixi > Sidee loo nadiifiyaa Data Apps 'ka iPhone ah